FAQ - Guangzhou MCM Certification＆Test Co., Ltd.
Nahoana isika no mila mahazo ny taratasy fanamarinana?
Ny firenena tsirairay dia manana rafitra fanamarinana mba hiarovana ny fahasalaman'ny mpampiasa amin'ny loza sy hisorohana ny fikorontanan'ny spectrum.Ny fahazoana mari-pankasitrahana dia dingana tsy maintsy atao alohan'ny hamidy vokatra iray ao amin'ny firenena iray manokana.Raha tsy voamarina araka ny fepetra mifandraika amin'izany ny vokatra dia iharan'ny sazy ara-dalàna.
Ilaina ve ny fitsapana eo an-toerana mba hahazoana fanamarinana manerantany?
Firenena maro manana rafitra fandaminana fitiliana no mitaky fitiliana eo an-toerana, fa ny firenena sasany dia afaka manolo ny fitsapana eo an-toerana amin'ny fanamarinana toy ny CE/CB sy ny tatitra momba ny fitsapana.
Inona ny fampahalalana na antontan-taratasy fototra tokony homeko ho an'ny fanombanana ny tetikasa vaovao?
Omeo azafady ny anaran'ny vokatra, ny fampiasana ary ny famaritana ny fanombanana.Raha mila fanazavana amin'ny antsipiriany dia aza misalasala mifandray aminay.
Efa voamarina ve ny daty tsy maintsy ananan'ny fanamarinana bateria Malezia?Rahoviana izany?
Ny minisiteran’ny Varotra anatiny sy ny fanjifana (KPDNHEP) dia miasa amin’ny fandrafetana sy fanatsarana ny fizotran’ny fanamarinana ary andrasana tsy ho ela izany.Hampahafantatra anao izahay rehefa misy vaovao.
Raha misy bateria lithium haondrana any Amerika Avaratra ary amidy eny amin'ny fivarotana lehibe, inona no fanamarinana ilaiko ankoatra ny UL 2054 sy CTIA?
Mila manoratra ny vokatra ao amin'ny rafitra WERCSmart ianao ary eken'ny mpivarotra.Mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.
Raha ny tokony ho izy, ahoana ny fiasan'ny fisoratana anarana CRS sy ny fanamarinana ho an'ny sela sy ny bateria?
Voalohany, halefa any amin'ny laboratoara mahay any India ny santionany fitsapana.Rehefa vita ny fitsapana dia hamoaka tatitra amin'ny fomba ofisialy ny laboratoara.Mandritra izany fotoana izany, ny ekipa MCM dia hanomana ny antontan-taratasy fisoratana anarana mifandraika amin'izany.Aorian'izay, ny ekipan'ny MCM dia mandefa ny tatitra fitsapana sy ny antontan-taratasy mifandraika amin'izany ao amin'ny vavahadin-tserasera BIS.Aorian'ny fandinihan'ny mpiasan'ny BIS dia hisy taratasy fanamarinana nomerika havoaka ao amin'ny vavahadin-tserasera BIS izay azo alaina.
Miova ve ny saran'ny fanamarinana BIS eo ambany fitarihan'ny COVID-19?
Hatramin'izao, tsy misy taratasy ofisialy navoakan'ny BIS.
Afaka manome serivisy solontenan'ny Thailandey eo an-toerana ve ianao raha te-hanao fanamarinana TISI?
Eny, manome serivisy solontenan'ny Thai izahay, serivisy tokana amin'ny fanamarinana TISI, manomboka amin'ny fahazoan-dàlana fanafarana, fitsapana, fisoratana anarana mankany amin'ny fanondranana.
Moa ve misy fiantraikany amin'ny Covide-19 sy ny fifanolanana ara-jeopolitika ve ny fotoam-pitaterana santionany amin'ny fitiliana BIS?
Tsia, afaka mandefa santionany avy amin'ny loharano isan-karazany izahay mba hahazoana antoka fa tsy hisy fiantraikany amin'ny fotoana hitarika.
Te hangataka certificat izahay, saingy tsy fantatray izay karazana certificat tokony hangatahina.
Azonao atao ny manome anay ny famaritana ny vokatra, ny fampiasana, ny fampahalalana momba ny kaody HS ary ny faritra fivarotana andrasana, dia hamaly anao ny manam-pahaizanay.
Ny fanamarinana sasany dia mitaky santionany halefa any amin'ny fitsapana eo an-toerana, saingy tsy manana fantsona lozika izahay.
Raha misafidy ny MCM ianao, dia hanome anao serivisy tokana "mandefa santionany - fitsapana - fanamarinana".Ary afaka mandefa santionany any India, Vietnam, Malezia, Brezila ary ny faritra hafa azo antoka sy haingana.
Rehefa mangataka mari-pankasitrahana iraisam-pirenena momba ny bateria na sela, mila mangataka fisafoana orinasa ve aho?
Mikasika ny fepetra takian'ny fisafoana orinasa dia miankina amin'ny fitsipiky ny fanamarinana ny firenena mpanondrana izany.Ohatra, ny fanamarinana TISI any Thailand sy ny fanamarinana Type 1 KC any Korea Atsimo dia samy manana ny fepetra takian'ny orinasa.Aza misalasala mifandray aminay raha mila fanazavana manokana.
Iharan'ny fanamarinana tsy maintsy atao ve ny cellule/batterie?
Hatramin'ny nampiharana ny IEC62133-2017 dia fanamarinana tsy maintsy atao amin'ny ankapobeny izany, saingy mila tsaraina araka ny fitsipiky ny fanamarinana ao amin'ny firenena fanondranana ny vokatra.Marihina fa ny cellule/batterie bokotra dia tsy ao anatin'ny sehatry ny fanamarinana BSMI sy ny fanamarinana KC, izay midika fa tsy mila mangataka fanamarinana KC sy BSMI ianao rehefa mivarotra vokatra toy izany any Korea Atsimo sy Taiwan.